လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ကို ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ မက်ဆီ နှုတ်ဆက်ရတော့မှာလား
လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ကို ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ မက်ဆီ Messi လက်ပြနှုတ်ဆက်ရတော့မှာလား
22 Jun 2018 . 4:16 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်တွေကတော့ အရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်နေဆဲပါပဲ။ ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ အဓိက စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ကြတာက မက်ဆီ Messi ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှု၊ သူတို့ကို စိန်ခေါ်ဖို့ အသင့်ရှိနေတဲ့ ဘရာဇီးလ်နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှူး နေမာ Neymar ခြေစွမ်းပြနိုင်မလားဆိုတာပါ။ ပရိသတ်တွေ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ပေါ်တူဂီ Superstar စီရော်နယ်လ်ဒိုက အသင်းကို အကောင်းဆုံးဦးဆောင်ပြီး သွင်းဂိုး(၄)ဂိုးနဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ မက်ဆီကတော့ ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့အတူ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အာဂျင်တီးနားအသင်းကလည်း ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အုပ်စုအဆင့်က လှည့်ပြန်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ ရင်ဆိုင်နေပြီ။
ဒီနေရာမှာ မက်ဆီနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ကြားမှာ ဘာလို့ဒီလောက်အထိ ရလဒ်ပိုင်း၊ ခြေစွမ်းပိုင်း ကွဲပြားခြားနားသွားလဲဆိုတာကို သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အာဂျင်တီးနားအသင်းရော၊ ပေါ်တူဂီအသင်းပါ မက်ဆီ၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ တစ်ဦးတည်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားတယ်လို့ ပြောရတဲ့အထိ ဒီကစားသမားနှစ်ဦးအပေါ် အလွန်အကျွံ မှီခိုနေရတာခြင်း အတူတူပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ မတူညီတာက ပေါ်တူဂီအသင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက အသင်းအပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှု၊ Motivation ၊ Leadership စတဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ ပြည့်စုံသလို အသင်းဖော်တွေရဲ့ အဓိက တာဝန်က စီရော်နယ်လ်ဒို ဂိုးသွင်းနိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးဖို့ပဲ။ ဒီအပိုင်းမှာ မက်ဆီနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအကြား ကွာခြားလွန်းပါတယ်။ မက်ဆီဟာ World Best Player ၊ Gifted Player တစ်ဦးဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ရွေးစင်အသင်းမှာတော့ မက်ဆီဟာ အသင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦးလို့ သတ်မှတ်ဖို့တော့ ခက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသင်းကို ဦးဆောင်နိုင်မှုအပိုင်းမှာ မက်ဆီ အားနည်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ စပိန်နဲ့ပေါ်တူဂီ၊ အိုက်စလန်နဲ့ အာဂျင်တီးနားပွဲကို ယှဉ်ပြချင်တယ်။ စပိန်နဲ့ပွဲမှာ ပေါ်တူဂီက အနိုင်-သရေ-အရှုံး အနေအထားကနေ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ Magnificent Free Kick Goal နဲ့ သရေတစ်မှတ်ရအောင် ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု Aggressive ၊ အနိုင်မခံအရှုံးမပေးချင်တဲ့စိတ် Fighting Spirit ကို ပရိသတ်တွေ မြင်တွေ့ခဲ့ရမှာဖြစ်ပြီး ပွဲအပြီးမှာ အသင်းဖော်တွေကို Motivate လုပ်နေတဲ့ အမူအရာတွေကိုလည်း တွေ့နိုင်တယ်။
အိုက်စလန်နဲ့ပွဲမှာ အာဂျင်တီးနားအသင်း (၁၉)မိနစ်မှာ ဦးဆောင်ဂိုးရခဲ့ပေမယ့် (၂၃)မိနစ်မှာ ချေပဂိုးပြန်ပေးခဲ့ရတယ်။ နောက်ထပ်ဂိုးတွေသွင်းမယ်ဆိုရင် လုံလောက်တဲ့အချိန်ပမာဏ ကျန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မက်ဆီ ပယ်နယ်တီလွဲချော်ခဲ့ခြင်းနဲ့အတူ သရေတစ်မှတ်ပဲရရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီပွဲမှာ မက်ဆီရဲ့ Facial Expression ကို ကြည့်ရင် သူ့ပုံစံက လုံးဝ Active မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကျသလိုဖြစ်နေပြီး နိုင်လိုစိတ်ပါ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားပါ။
မော်ရိုကိုနဲ့ပွဲမှာ ပေါ်တူဂီ ခြေမသာခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို ဂိုးသွင်းတယ်၊ ပေါ်တူဂီနိုင်တယ်။ ခရိုအေးရှားနဲ့ပွဲမှာ အာဂျင်တီးနား ခြေမကောင်းခဲ့ဘူး၊ မက်ဆီ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘူး၊ အာဂျင်တီးနား ရှုံးတယ်။ ရလဒ်ပိုင်းတွေကြောင့် မက်ဆီရဲ့ ခြေစွမ်း ကျဆင်းနေပြီလို့တော့ သတ်မှတ်လို့ မရနိုင်ဘူး။ အာဂျင်တီးနားအသင်း ကစားခဲ့တဲ့(၂)ပွဲမှာ မက်ဆီနဲ့ တွဲကစားမယ့်သူမရှိဘူး၊ သူ့ကို ဖန်တီးပေးမယ့်သူလည်း မရှိဘူး၊ ကိုယ်တိုင် Space တွေရှာ၊ ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကို Individual Skills တွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်၊ ဒီကြားထဲမှာ နည်းပြဆမ်ပါအိုလီ Sampaoli ကလည်း မက်ဆီနဲ့တွဲဖက်ကစားနိုင်လို့ ရလောက်တဲ့ ဒီဘားလား Dybala ကို ခေါက်ထားခဲ့သေးတယ်။
ဒါဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီ၊ ပေါ်တူဂီနဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းတို့အကြား ကွာခြားချက်ပါပဲ။ အသင်းရလဒ်မကောင်းရင် အဲဒီအသင်းက အဓိက ကစားသမားကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးကြတာကြောင့် အခု အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ ရလဒ်ဆိုးတွေအတွက် မက်ဆီကိုပဲ အားလုံးက ၀ိုင်းအပြစ်တင်နေကြပါပြီ။ နောက်ဆုံးသတင်းတွေအရဆိုရင်လည်း မက်ဆီကို နိုင်ငံအသင်းက ပြန်အနားယူဖို့တောင် ပရိသတ်တွေက တောင်းဆိုနေကြတယ်လို့ သိရတယ်။ ဘာစီလိုနာနဲ့ ဆုဖလားပေါင်းများစွာ ရယူခဲ့ပြီး တစ်ဦးချင်းအကောင်းဆုံးဆုတွေ ရယူခဲ့တဲ့ မက်ဆီအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ကွက်လပ်က နိုင်ငံအသင်းနဲ့ ဆုဖလားရယူဖို့ပါ။ အခုလောလောဆယ်တော့ အာဂျင်တီးနားအသင်း အုပ်စုက တက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးပွဲမှာ နိုက်ဂျီးရီးယားအသင်းနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး မဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့ လိုနေပါပြီ။ မက်ဆီအနေနဲ့လည်း ဒီကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအပြီးကျရင် လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ကို အဆုံးသတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မက်ဆီအနေနဲ့ လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ကို ကမ္ဘာ့ဖလားရယူပြီး အဆုံးသတ်နိုင်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အုပ်စုအဆင့်က လှည့်ပြန်ပြီး နှုတ်ဆက်ရတော့မှာလားဆိုတာတော့ . . . .
Photo:The Times of Israel,Independent,Goal.com,AP
လကျရှေးစငျကစားသမားဘဝကို ရှုံးနိမျ့မှုတှနေဲ့ မကျဆီ Messi လကျပွနှုတျဆကျရတော့မှာလား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲစဉျတှကေတော့ အရှိနျဟုနျပွငျးပွငျးနဲ့ ရှဆေ့ကျနဆေဲပါပဲ။ ဒီနှဈကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပရိသတျတှေ အဓိက စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့ကွတာက မကျဆီ Messi ၊ စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo တို့ရဲ့ အားပွိုငျမှု၊ သူတို့ကို စိနျချေါဖို့ အသငျ့ရှိနတေဲ့ ဘရာဇီးလျနာမညျကြျော တိုကျစဈမှူး နမော Neymar ခွစှေမျးပွနိုငျမလားဆိုတာပါ။ ပရိသတျတှေ သိတဲ့အတိုငျးပဲ ပျေါတူဂီ Superstar စီရျောနယျလျဒိုက အသငျးကို အကောငျးဆုံးဦးဆောငျပွီး သှငျးဂိုး(၄)ဂိုးနဲ့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ ရပျတညျနတေယျ။ သူ့ရဲ့ အဓိကပွိုငျဘကျဖွဈတဲ့ မကျဆီကတော့ ရလဒျဆိုးတှနေဲ့အတူ ခွစှေမျးပွနိုငျခွငျးမရှိဘဲ အာဂငျြတီးနားအသငျးကလညျး ၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလားနောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျ အုပျစုအဆငျ့က လှညျ့ပွနျရမယျ့အနအေထားနဲ့ ရငျဆိုငျနပွေီ။
ဒီနရောမှာ မကျဆီနဲ့ စီရျောနယျလျဒိုတို့ကွားမှာ ဘာလို့ဒီလောကျအထိ ရလဒျပိုငျး၊ ခွစှေမျးပိုငျး ကှဲပွားခွားနားသှားလဲဆိုတာကို သုံးသပျခငျြပါတယျ။ တကယျတော့ အာဂငျြတီးနားအသငျးရော၊ ပျေါတူဂီအသငျးပါ မကျဆီ၊ စီရျောနယျလျဒိုတို့ တဈဦးတညျးနဲ့ တညျဆောကျထားတယျလို့ ပွောရတဲ့အထိ ဒီကစားသမားနှဈဦးအပျေါ အလှနျအကြှံ မှီခိုနရေတာခွငျး အတူတူပါပဲ။
ဒါပမေဲ့ မတူညီတာက ပျေါတူဂီအသငျးမှာ စီရျောနယျလျဒိုက အသငျးအပျေါ သွဇာလှမျးမိုးနိုငျမှု၊ Motivation ၊ Leadership စတဲ့ အရညျအသှေးတှနေဲ့ ပွညျ့စုံသလို အသငျးဖျောတှရေဲ့ အဓိက တာဝနျက စီရျောနယျလျဒို ဂိုးသှငျးနိုငျအောငျ ပံ့ပိုးပေးဖို့ပဲ။ ဒီအပိုငျးမှာ မကျဆီနဲ့ စီရျောနယျလျဒိုအကွား ကှာခွားလှနျးပါတယျ။ မကျဆီဟာ World Best Player ၊ Gifted Player တဈဦးဆိုတာ ဘယျသူမှ မငွငျးနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ လကျရှေးစငျအသငျးမှာတော့ မကျဆီဟာ အသငျးခေါငျးဆောငျကောငျးတဈဦးလို့ သတျမှတျဖို့တော့ ခကျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အသငျးကို ဦးဆောငျနိုငျမှုအပိုငျးမှာ မကျဆီ အားနညျးတယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ စပိနျနဲ့ပျေါတူဂီ၊ အိုကျစလနျနဲ့ အာဂငျြတီးနားပှဲကို ယှဉျပွခငျြတယျ။ စပိနျနဲ့ပှဲမှာ ပျေါတူဂီက အနိုငျ-သရေ-အရှုံး အနအေထားကနေ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ Magnificent Free Kick Goal နဲ့ သရတေဈမှတျရအောငျ ယူနိုငျခဲ့တယျ။ အဲဒီပှဲမှာ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စိတျအားထကျသနျမှု Aggressive ၊ အနိုငျမခံအရှုံးမပေးခငျြတဲ့စိတျ Fighting Spirit ကို ပရိသတျတှေ မွငျတှခေဲ့ရမှာဖွဈပွီး ပှဲအပွီးမှာ အသငျးဖျောတှကေို Motivate လုပျနတေဲ့ အမူအရာတှကေိုလညျး တှနေို့ငျတယျ။
အိုကျစလနျနဲ့ပှဲမှာ အာဂငျြတီးနားအသငျး (၁၉)မိနဈမှာ ဦးဆောငျဂိုးရခဲ့ပမေယျ့ (၂၃)မိနဈမှာ ခပြေဂိုးပွနျပေးခဲ့ရတယျ။ နောကျထပျဂိုးတှသှေငျးမယျဆိုရငျ လုံလောကျတဲ့အခြိနျပမာဏ ကနျြရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မကျဆီ ပယျနယျတီလှဲခြျောခဲ့ခွငျးနဲ့အတူ သရတေဈမှတျပဲရရှိခဲ့တယျ။ အဲဒီပှဲမှာ မကျဆီရဲ့ Facial Expression ကို ကွညျ့ရငျ သူ့ပုံစံက လုံးဝ Active မဖွဈခဲ့ပါဘူး။ စိတျဓာတျကသြလိုဖွဈနပွေီး နိုငျလိုစိတျပါ ပြောကျဆုံးနတေဲ့အနအေထားပါ။
မျောရိုကိုနဲ့ပှဲမှာ ပျေါတူဂီ ခွမေသာခဲ့ဘူး၊ ဒါပမေဲ့ စီရျောနယျလျဒို ဂိုးသှငျးတယျ၊ ပျေါတူဂီနိုငျတယျ။ ခရိုအေးရှားနဲ့ပှဲမှာ အာဂငျြတီးနား ခွမေကောငျးခဲ့ဘူး၊ မကျဆီ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့ဘူး၊ အာဂငျြတီးနား ရှုံးတယျ။ ရလဒျပိုငျးတှကွေောငျ့ မကျဆီရဲ့ ခွစှေမျး ကဆြငျးနပွေီလို့တော့ သတျမှတျလို့ မရနိုငျဘူး။ အာဂငျြတီးနားအသငျး ကစားခဲ့တဲ့(၂)ပှဲမှာ မကျဆီနဲ့ တှဲကစားမယျ့သူမရှိဘူး၊ သူ့ကို ဖနျတီးပေးမယျ့သူလညျး မရှိဘူး၊ ကိုယျတိုငျ Space တှရှော၊ ပွိုငျဘကျခံစဈကို Individual Skills တှနေဲ့ ကြျောဖွတျ၊ ဒီကွားထဲမှာ နညျးပွဆမျပါအိုလီ Sampaoli ကလညျး မကျဆီနဲ့တှဲဖကျကစားနိုငျလို့ ရလောကျတဲ့ ဒီဘားလား Dybala ကို ခေါကျထားခဲ့သေးတယျ။
ဒါဟာ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီ၊ ပျေါတူဂီနဲ့ အာဂငျြတီးနားအသငျးတို့အကွား ကှာခွားခကျြပါပဲ။ အသငျးရလဒျမကောငျးရငျ အဲဒီအသငျးက အဓိက ကစားသမားကိုပဲ လကျညှိုးထိုးကွတာကွောငျ့ အခု အာဂငျြတီးနားအသငျးရဲ့ ရလဒျဆိုးတှအေတှကျ မကျဆီကိုပဲ အားလုံးက ဝိုငျးအပွဈတငျနကွေပါပွီ။ နောကျဆုံးသတငျးတှအေရဆိုရငျလညျး မကျဆီကို နိုငျငံအသငျးက ပွနျအနားယူဖို့တောငျ ပရိသတျတှကေ တောငျးဆိုနကွေတယျလို့ သိရတယျ။ ဘာစီလိုနာနဲ့ ဆုဖလားပေါငျးမြားစှာ ရယူခဲ့ပွီး တဈဦးခငျြးအကောငျးဆုံးဆုတှေ ရယူခဲ့တဲ့ မကျဆီအတှကျ လိုအပျနတေဲ့ကှကျလပျက နိုငျငံအသငျးနဲ့ ဆုဖလားရယူဖို့ပါ။ အခုလောလောဆယျတော့ အာဂငျြတီးနားအသငျး အုပျစုက တကျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြရှိနပေါသေးတယျ။ နောကျဆုံးပှဲမှာ နိုကျဂြီးရီးယားအသငျးနဲ့ ကစားရမှာဖွဈပွီး မဖွဈမနအေနိုငျရဖို့ လိုနပေါပွီ။ မကျဆီအနနေဲ့လညျး ဒီကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲအပွီးကရြငျ လကျရှေးစငျကစားသမားဘဝကို အဆုံးသတျဖို့ရှိနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မကျဆီအနနေဲ့ လကျရှေးစငျကစားသမားဘဝကို ကမ်ဘာ့ဖလားရယူပွီး အဆုံးသတျနိုငျမှာလား၊ ဒါမှမဟုတျ အုပျစုအဆငျ့က လှညျ့ပွနျပွီး နှုတျဆကျရတော့မှာလားဆိုတာတော့ . . . .